Somaliland:Shirweynihii Garabka Haweenka Xisbiga WADANI Oo Lagu Doortay Guddoomiye Iyo Ku-xigeen
Home Somali News Somaliland:Shirweynihii Garabka Haweenka Xisbiga WADANI Oo Lagu Doortay Guddoomiye Iyo Ku-xigeen
Shirweynahii koowaad ee garabka haweenka heer qaran ee xisbiga mucaaradka ah ee Waddani, oo illaa saaka ka socday hotel Maansoor ee magaalada Hargeysa, ayaa si rasmi ah hada loogu doortay guddoomiyaha, guddoomiye ku xigeeno iyo hogaanka garabka haweenka heer qaran ee xisbiga Wadani.
Madashan oo uu goob joog ka ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadani Md.Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro), hogaanka xisbiga, ergooyinka garabka haweenka ee ka kala socday gobalada dalka iyo marti sharaf kale oo aad u tira badan.
Waxaan ka dib codayn gacan taag ah si rasmi ah loogu doortay guddoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga Waddani Marwo:Ifraax Cumar Xasan oo ka socotay ergooyinka ka yimi gobalka Hawd, halka guddoomiye ku xigeenka koowaad-na loogu doortay Marwo:Foosiya Kayse Faarax oo iyaduna sida oo kale ka socotay gobalka Sool, waxaa sida oo kale halkaasi lagu doortay guddoomiye ku xigeenka Labaad ee garabka haweenka xisbiga Wadani Marwo:Safiya Cumar Xasan oo ka socotay gobalka Maroodi-jeex, kana soo jeeda beelaha la hayb sooco ee Gabooye.
Shirweynahan koowaad ee garabka haweenka heer qaran ee xisbiga Wadani, waxaa sida oo kale lagu doortay hogaanka garabkaasi, waxaana ay kala ahaayeen xubnaha halkaasi lagu doortay.
Hogaanka Maaliyada oo loo doortay Saynab aw-Cilmi Maxamed kana soo jeeda gobalka Awdal.
Hogaanka Waxbarashada oo loo doortay Deeqa Dhamac Cabdilaahi kana soo jeeda gobalka Maroodi-jeex.
Hogaanka Qorsheynta oo loo doortay Muxubo Maxamed Axmed oo iyaduna ka soo jeeda gobalka Sanaag.
Hogaanka abaabulka iyo wacyi-gelinta Faadumo Aadan Cawad oo ka soo jeeda gobalka Maroodi-jeex.
Hogaanka Laamaha dibedda Nasra Ismaaciil Maxamed oo ka soo jeeda gobalka Togdheer.
Hogaanka xidhiidhka gobalada iyo degmooyinka Aamina Maxamed Xirsir oo iyaduna ka soo jeeda gobalka Togdheer.
Hogaanka cadaalada oo loo doortay Mushtaaq Ibraahim Nuur oo ka soo jeeda gobalka Maroodi-jeex.
Hogaanka xuquuqul insaanka oo loo doortay Nimco Cabdi aw-Cali, kana soo jeeda gobalka Maroodi-jeex.
Hogaanka arrimaha bulshada oo loo doortay Caasha Maxamed Dege, kana soo jeeda gobalka Saaxil.
Xoghayaha garabka haweenka ee heer qaran oo iyadana loo doortay Maryan Maxamuud Dirir oo ka soo jeeda gobalka Sanaag.
Xoghaye ku xigeenka garabka haweenka heer qaran Idil Cabdilaahi Giire oo ka soo jeeda gobalka Salel.
Afhayeenka garabka haweenka heer qaran ee xisbiga Wadani oo iyadana loo doortay Amaal Yuusuf Cabdilaahi, oo ka soo jeeda degmada Salaxlay.
Lacaghaye oo iyadana loo doortay Amran Xaashi Cabdi oo ka soo jeeda gobalka Maroodi-jeex.
West Ham vs Tottenham – Miyuu Jose Mourinho Guul Ku Bilaaban Doonaa Waayahiisa Spurs? Yaase Shaxdiisa Kusoo Bilaaban Kara?
War-saxaafadeed Ay Soo saareen Xisbiga Kulmiye Lantiisa UK Kaas Oo Ku Saabsan Khilaafka Hadheeyey Xisbiga KULMIYE
Somaliland Oo Markii Ugu Horraysay Ka Hadashay Heshiisyada Dalalka Itoobiya, Eritrea Iyo Soomaaliya
Somaliland: Halis Caafimaad-darro Oo Lagu Sheegay Khudaarta Somaliland Uga Timaadda Dalka Masar Iyo Tirada Dalalka Adduunka Ee Hore U Mabnuucay.
Somaliland: Wasiirka Hawlaha Guud Iyo Guriyeynta Somaliland Oo Burburiyey Xarunta Korontada Ee Magaalada Laascaanood, Dacwad Ka Dhan Wasiirka Oo Loo Gudbinayo Madaxweyne Muuse Biixi